Omicron (အိုမီခရွန်) အတွက် သိကိုသိရမယ့် အချက် 17 ချက်…. – Alanzayar
Omicron (အိုမီခရွန်) အတွက် သိကိုသိရမယ့် အချက် 17 ချက်….
ခုလက်ရှိ တကမ္ဘာလုံး ကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့ ရောဂါဟာ Omicron (အိုမီခရွန်) လို့ခေါ်တဲ့ Covid သန္ဓေပြောင်း မျိုးစိတ်အသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Omicron (အိုမီခရွန်) ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး လက္ခဏာတွေကတော့–
၁။ လည်ချောင်းနာမယ် ၂။ နှာရည်ယိုမယ် ၃။ ချောင်းဆိုးမယ် ၄။ ကြွက်သားနာမယ်/ ခါးနာမယ် ၅။ အရမ်းနုံးမယ် ၆။ ခေါင်းကိုက်မယ် .. ထူးခြားတာက အရင် Covid တွေလို အနံ့ပျောက်/ အရသာပျောက် ခြင်း သိပ်မရှိပါ။ ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ် အလွန်ရှားပါတယ်။
Omicron (အိုမီခရွန်) Virus ဟာ ကူးစက်မှု အရမ်းမြန်ပါတယ်။ လက်ရှိချိန်ထိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သမိုင်းတလျှောက် ကူးစက်မှု အမြန်ဆုံး သန္ဓေပြောင်း Virus အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Omicron (အိုမီခရွန်) ရဲ့ အဆိုးထဲက အကောင်းကတော့ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးနှုန်း က အရင် Covid မျိုးစိတ်တွေထက် လွန်စွာနည်းတာကိုတော့ တွေ့ရှိရပါတယ်။ COVID-19 ဟာ မာယာအရမ်းများတာကြောင့် ကျနော် ဒေါက်တာထက်ဝင်း အနေနဲ့ မှာကြားချင်တာကတော့ Omicron (အိုမီခရွန်) ကိုလည်း လုံးဝ မပေါ့ပါနဲ့ လို့ မှာကြားချင်ပါတယ်။ ကျနော် ဒေါက်တာထက်ဝင်း အနေနဲ့ Omicron (အိုမီခရွန်) အကြောင်း သိကိုသိရမယ့် အချက် (17) ချက်ကိုပြောပြပေးပါ့မယ်။
1. အပြင်သွားတိုင်း Mask တပ်ပါ။ Face shield ကာထားပါ။ 2. လက်ကို မကြာခဏ စနစ်တကျ စက္ကန့် ၂၀ ကြာ သေချာစွာဆေးပါ။ 3. လူစုလူဝေးနေရာများကို လုံးဝရှောင်ရှားပါ။ 4. COVID ကာကွယ်ဆေး အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်ထိုးကိုထိုးပါ။ Booster dose လို့ခေါ်တဲ့ ၃ ကြိမ်မြောက် ထိုးရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ 5. မိမိအိမ်ကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ထားပါ။ 6. အစားအသောက်ကို အာဟာရပြည့်ဝစွာစားပါ။ 7. နေ့စဉ် နာရီဝက်ခန့် လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပါ။ 8. တစ်နေ့ကို Vitamin C 500 mg သောက်ပါ။ 9. တစ်နေ့ကို ရေ ၂ လီတာ အနည်းဆုံးသောက်ပါ။ 10. တစ်နေ့ကို ၈ နာရီ အနည်းဆုံး အိပ်ဆက်ပါ။
11. အိမ်တိုင်းမှာ သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် တိုင်းစက် (Pulse Oximeter) နဲ့ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ (Thermometer) ဆောင်ထားပါ။(SPO2 သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် ရာခိုင်နှုန်း 95% အထက်ဆိုပုံမှန်ပါပဲ) (Covid-19 အဖျားသည် များသောအားဖြင့် 100F မှ 104F ထိတက် တတ်ပါတယ်) 12. SPO2 90% အောက်ဆို Oxygen ရှူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ 13. ကိုယ့်အိမ်ကလူတစ်ယောက် လည်ချောင်းနာခြင်း၊ နှာရေယိုခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းဖြစ်ရင် အိမ်မှာ နှာခေါင်းတို့ဘက် (Nasal Swab Test/ RDT) စစ်ဆေးပါ။အခန်းခွဲနေပါ။
14. နှာခေါင်းတို့ဘက်အဖြေဟာ Negative (ရောဂါမရှိ) ကြောင်းပြနေရင်လည်း အခန်းခွဲနေပါ။ တချို့သူတွေ အဖြေမပေါ်ဘဲ ရောဂါရှိတဲ့သူများရှိပါတယ်။ ရောဂါ အဖြေကလည်း လက္ခဏာပြပြီး ၃ ရက်လောက်မှ ပေါ်တတ်ပါတယ်။ သတိထားပါ။ သူကိုင်တွယ်ထားတဲ့ အသုံးအဆောင်များကို ပိုးသတ်ပါ။
15. ဖျားလျှင် Paracetamol 500 mg ကို ဖျားတိုင်း ၄ နာရီခြားသောက်လို့ရပါတယ်။ ဖျားတဲ့ ရက်ထိ သောက်လို့ရပါတယ်။ 16. အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ကလေးငယ်များ၊ အသက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နာတာရှည် ရောဂါဝေသနာရှင်များ၊ ကိုယ်ခံအား ကျဆင်းနေသူများကို အပြင်ကို လုံးဝ လုံးဝ မထွက်ခိုင်းပါနဲ့။ 17. နှာခေါင်းတို့ဘက်မှာ Positive (ရောဂါရှိသည်) ဟုပြသပါက တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နှင့် သေသေချာချာ ပြသပြီး ချက်ချင်းကုသမှုခံယူပါ။
ယခုအခါ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားပြစရာမလိုဘဲ Online နဲ့ပါ ပြသလို့ရလို့ ဘယ်နေရာမဆို အလွယ်တကူပြသနိုင်ပါတယ်။ ဒီလောက်လွယ်ကူနေတဲ့ခေတ်မှာ ဆေးခန်းမပြဘဲ ကြိတ်ကုတာ လုံးဝလုံးဝ မပြုလုပ်ပါနဲ့။ ဒီ အပေါ်ကအချက် (17) ချက်ကို သေချာ လိုက်နာခြင်းဖြင့် Omicron(အိုမီခရွန်) မျိုးစိတ်အသစ်ကို ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူသားတိုင်း ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေလို့ ကျနော် ဒေါက်တာထက်ဝင်းမှ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါတယ်။ မေတ္တာဖြင့် ဒေါက်တာထက်ဝင်း 🙏
Previous Article ဖုန်းရေစိုသွားတဲ့ အခါပြင်ဆိုင်မသွားရအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
Next Article မိမိရဲ့ ချစ်သူနဲ့ ရှေးရေစက်ဆုံတဲ့ ဖူးစာဖက်တွေဆိုတာကို ဒီလိုနည်းနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်